Fahazarana tsara sy fahazarana tsara ho an'ny alika Fahazarana tsara sy fanao mahazatra ho an'ny alika | Tontolo alika
Fahazarana tsara sy fahazarana tsara ho an'ny alika
Angamba manana alika alika kely na olon-dehibe manana fahazaran-dratsy ratsy ianao ary tsy azonao antoka hoe aiza no hanombohana. Ampianaro ny biby fiompinao ny fahazarana sy fomba fanao tsara kokoas. Tsy mora foana ny fampiofanana ny alikanao, fa azo antoka fa tena mitondra valisoa.
Ny alika dia biby mahazatra Ary ny fomba fitondran-tenan'izy ireo dia voafaritra amin'ny fahatsapany sy ny hafaliany eo amin'ny tontolo iainany. Raha te hanana fomba fijery tsara amin'ny fiainana ianao ary afaka miatrika ny fiovana rehetra manjo anao, dia tsy maintsy mametraka fomba mahazatra ho an'ny biby fiompinao ianao ary hikarakara izany tsy tapaka.
1 Ireo no fahazarana sy fanao mahazatra amin'ny alika
1.1 Fahazarana poti
1.2 Fandaharana ara-tsakafo
1.3 Mametraha fanazaran-tena
2 Fahaiza-manao alika sy fanentanana ara-tsaina
2.1 Fiaraha-miasa amin'ny alika hafa
Ireo no fahazarana sy fanao mahazatra amin'ny alika
Ny alika mahay mandanjalanja izay azo antoka amin'ny tontolo iainany, amin'ny fanaony ary amin'ny fiainany andavanandro, dia mahita fa mora kokoa ny mitety fiovana na fikorontanana mitranga, na kasaina izany na tsy ampoizina
Ny ampahany sarotra indrindra dia manomboka mametraha fahazarana isan'andro. Raha vantany vao manomboka miasa mankany amin'ny tanjonao ianao, dia mora kokoa ny ambiny.
Ny fampiofanana poti ny biby fiompinao dia ny tsy fitoviana, ny faharetana ary ny fanamafisana tsara. Atombohy amin'ny fototra:
Fero ny fidirany amin'ny faritra hafa amin'ny tranoNa manidy ny varavaran'ny efitrano, na miakatra boaty mba hanananao toerana malalaka.
Aza sazy mihitsy ny alikanao raha diso toerana no nalehanao. Mitranga ny lozam-pifamoivoizana ary tsy takatry ny alika amin'ny antony mitovy amin'ny olona ny alika. Aza hadino fa ny alikanao dia hanatsara kokoa ny tsy fiovanao.
Valio soa ny alikanao raha manao soa. Omeo fanomezana izy raha vantany vao mankamin'ny trano fidiovana amin'ny toerana voatondro izy.
Fahano ny alikao amin'ny fotoana mitovy isan'andro, dia zava-dehibe tsy ho an'ny fiadananao ara-pihetseham-po sy ara-tsaina fotsiny, fa koa satria ny metabolismao dia ho zatra amin'ny lamina ary hanitsy ny fotoam-pisakafoanana efa napetraka, ary koa ny isan'ny servisy antenainao. Miezaha hanome sakafo azy amin'ny toerana iray ihany isan'andro alao antoka fa milamina sy mahazo aina ho azy ny faritra.
Manoro hevitra anao izahay ny hanomboka ny zavatra fanaonao amin'ny maraina. Ny tongotra telopolo minitra dia afaka manampy anao sy ny alikanao hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanazaran-tena isan'andro, sady manatsara ny fihetsiky ny biby fiompinao.
Ho an'ny alika tena miasa, ny fehiloha an-trano isan'andro isan'andro, lavitra ny fanentanana rehetra, dia tsy hoe mankaleo fotsiny, fa mampitombo ny fihetsika izany. Ny lakilen'ny fiasana amin'ireo fanehoan-kevitra ireo dia ny fampiofanana mavitrika sy tsara, ary koa ny fiarahamonina miadana sy maharitra.
Manana olana amin'ny fitadiavana fotoana ilaina ve ianao? Mifoha maraina. Ento mivoaka mitsangatsangana izy alohan'ny hanakantsakanana ireo andraikitra amin'ny andro. Ianao koa dia hanampy amin'ny fametrahana ny alikanao amin'ny fanjakana milamina kokoa rehefa mivoaka miasa ianao.
Fahaiza-manao alika sy fanentanana ara-tsaina
Ny fampianarana ny alika fiofanana fototra momba ny alika dia tena ilaina amin'ny fiarovana azy ireo ary mba hifandraisana bebe kokoa amin'ny biby fiompinao.
Tokony hotadidinao fa ny fanomezana aingam-panahy ny alikanao dia ilaina amin'ny fahasambarany. Afaka mampiasa kilalao faharanitan-tsaina, tetika alika ary mankafy al latsaky ny 15 minitra isan'andro fialamboly malalaka, toy ny milalao baolina aminy. Alika miasa isan'andro miaraka amin'ny tompony, manampy amin'ny fanalefahana ny adin-tsaina, ho faly kokoa ary hahafantatra ny fomba hifandraisana tsara kokoa.
Fiaraha-miasa amin'ny alika hafa
Araho ny iray manitsy ny fahazarana fiaraha-monina miaraka amin'ny alika sy olona hafa, tena ilaina izany. Mahatonga azy io hifanaraka tsara kokoa amin'ireo fiovana samihafa amin'ny tontolo iainana ary mianatra mandefitra amin'ny anjara asany faharoa eo alohanao, tompony.
Ny alika izay tsy nifaneraserana araka ny tokony ho izy dia mety hijaly amin'ny olan'ny fitondran-tena amin'ny fahatanorany, toy ny tahotra, ny fihetsehana na ny fidirana an-tsehatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fahazarana tsara sy fahazarana tsara ho an'ny alika
Ny alikako dia tia mandoto sy mitsika any an-trano foana, tsy haiko ny mampianatra azy
Ahoana ny fomba hampisarahana alika roa miady
Mpanala fanaintainana voajanahary ho an'ny alika